Museum Byzantine, Museum Byzantine - Nicosia
Europe Cyprus Nicosia
Adreesị: The square nke Archbishop Cyprian (Archbishop Cyprian), (ókèala Archdiocese), Nicosia.
Ekwentị: +357 22 430008
Ebe nrụọrụ weebụ: www.makariosfoundation.org.cy
Oge ọrụ: Monday - Friday site na 09: 00-16: 30, Saturday site na 09: 00-13: 00.
Ọnụ iji gaa: 1,7 €
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'akụkọ ihe mere eme nke oge ochie, jide n'aka na ị ga-ahụ obere ụlọ ọrụ Byzantine Museum na Nicosia . Dabere na aha ahụ, o doro anya na anyị na-ekwu maka ebe a banyere Alaeze Ukwu Rom nke dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ebe a ma ama nke dị site na njedebe nke IV ruo n'etiti narị afọ nke 16. Alaeze Ukwu Byzantine nọ n'ókèala ndị dị otú a dịka Turkey, Bulgaria na Gris.
Ngosipụta nke ihe ngosi nka
Ihe ngosi Museum nke Nicosia na-enye ndị kasị ukwuu na Cyprus collection nke nkà mmụta okpukpe nke oge ochie Byzantium. N'agbanyeghi na ngosi nke ihe ngosi nka na-akwadoo nani ulo oru ato na otutu ulo, o nwere ike ijide awa abua ma obu awa na ihe ngosi nka. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla n'ozuzu nwere ike ịmasị oge mgbe mmadụ nwere ike ịmụta ihe ọmụma dị omimi gbasara ọdịnala, okpukpe na omenala nke dị anya gara aga daba n'akụkọ ihe mere eme nke steeti.
Ihe ngosi ihe ngosi nka gunyere ihe dika icho ihe di ichoputa nke ichota nke IX-XIX, ihe ndi di nso na ihe ndi ozo. E kwesịrị ilebara anya na akara ngosi nke narị afọ nke 12. ọ bụ onye ahụ wee bụrụ "ọlaedo" maka iconography nke Byzantium. Ọzọkwa na ụlọ ihe ngosi nka, e nwere nnukwu nchịkọta nke akwụkwọ ndị pụrụ iche ma dị mfe. Ọ bara uru ịṅa ntị na mpako obodo ahụ - 7 iberibe nke mosaic nke narị afọ nke isii, nke a mụrụ site n'aka onye ụka nke ụka a na-akpọ Panagia Kanakaria nke obodo nta dị na Littangịka. Tụkwasị na nke ahụ, ihe mkpofu 36 nke ihe ngosi ihe ngosi nke ihe owuwu ihe owuwu ihe nkiri nke narị afọ nke iri na ise nke e si na Church of Christ Antiphonitis pụta dabara n'ime ime ụlọ ihe ngosi nka . A na-ewere mosaics na eserese dị ka ebe kachasị amasị ihe ngosi nka.
Otu n'ime ala nke ụlọ Museum Byzantine na-eji ụlọ ọrụ omenala nke etiti a kpọrọ aha Achịbishọp Makarios III. Site n'ụzọ, ọ bụ n'okpuru nkwado nke ntọala ya ka e kere ihe ngosi nka, nke malite na Jenụwarị 18, 1982, onye ọ bụla chọrọ maka ego ole na ole ga-eleta ya.
Okpokoro ihe owuwu ochie nke oge ochie kwekọrọ na ọdịnaya na ikuku nke ụlọ ihe ngosi nka. Ụlọ ahụ n'onwe ya dị n'ókèala Archbishop Palace . O siri ike ịghara ịhụ, n'ihi na nri n'ihu ụlọ ihe ngosi nka na-anọchite anya nnukwu nnụnụ nke Achịbishọp Makarios.
Ị nwere ike ịbanye na Museum Byzantine na Nicosia site na bọs na-acha odo odo site na Solomos Square na Old Town. Enwere ego maka ndị okenye bụ ihe dịka euro 2. Ụlọ ọrụ ihe ngosi nka na-enwe obi ụtọ na ndị ọbịa kwa ụbọchị site n'elekere 9 nke ụtụtụ, ma e wezụga Sunday. Cheta na nke a abughi nani njem, ma nleta na ihe ngosi nka, na nke ndi okpukpe, ya mere, o doro anya na ị ga-eji ejiji kwesịrị ekwesị.
Chọọchị nke Tripiotis
Chọọchị nke Panagia Kanakaria
Arc nke Morachka
Ihe nkiri St. Francis
Ebe Pita Square
Ihe ngosi nka nke Avtomir
Nri ụtụtụ maka ọnwụ ọnwụ - menu
Charlize Theron gosipụtara aka ya na ìgwè nwoke na-agba agba
Mussels - ntụziaka nri
Na-ekpo ọkụ blanketị
Ha furu isi ha: na Gucci show, ihe mere na ụwa dum na-ekwu banyere!
Kedu otu esi eme ụlọ nnụnụ?
Andrea Pejic: enwere agbamakwụkwọ?
A na-enyo Chris Brown anya na ọ ga-eti nwunye nwanyị ihe
Ihe oyiyi nke cockatoo
Kedu ka ferns si amụba?
Nri nri dị mma na ihe ọjọọ
Ọhụụ nke ehihie 2017 - foto nke akwụkwọ akụkọ na ihe ndị na-akpali mmasị
Uwe ndi mmadu nke uwa
Gbanwee na oge njem
Stavrida - ntụziaka nri
Ebe a na-ekpuchi ma na-elekọta
Uwe ejiji ejiji n'uhuruchi 2013
Nri ude - ihe kachasị mma maka impregnating, na-ejuputa ma na-edozi desserts
Mgbe akụ strawberries na seedlings?
Olee otu esi akwadebe nwa maka akwukwo?
Ụlọ nke dollị n'aka